သင်ဒီမှာပါ: Home / ကြီးထွားလာ Solutions / ကမ္ဘာ့ Feed စေရန်မည်သို့: ORGANIZATION သို့မဟုတ် GMO?
အဖှဲ့အစညျးသို့မဟုတျမကြီးထွားလာ? အဆိုပါ Rodale Institute မှအစီရင်ခံစာ Download!
ဤအစီရင်ခံစာအတွက် Rodale Institute မှဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုပဲ 13 စာမျက်နှာများ, ကရှည်လျားသောအစီရင်ခံစာရဲ့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူကဂရုတစိုက်ဖတ်ရှုဖို့ငါ့ကိုခဏတစ် ယူ. , ဒါပေမယ့်အားလုံးအော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးစမ်းသပ်၏ 30 နှစ်ပေါင်းထံမှခက်အချက်အလက်များ, စာရင်းဇယား, ကိုးကားအတူထုပ်ပိုးရဲ့လို့ပဲ။
2 အဆိုပါ Rodale အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးအစီရင်ခံစာအကြောင်းကိုးကား
အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေး 45% လျော့နည်းစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်ပိုပြီးထိရောက်ဖြစ်ပါသည်
သမားရိုးကျစနစ်များ 40% ပိုမိုဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရန်
အဆိုပါ Rodale အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးအစီရင်ခံစာအကြောင်းကိုးကား
ယင်းရှာဖွေပါ Rodale Institute မှ 30 နှစ်များကိုဂုဏ်ပြုသောလယ်ယာစနစ်စမ်းသပ် ငါတို့ရဲ့ Planet ကို Fixer ရေရှည်တည်တံ့သောစာကြည့်တိုက် - Organics သည်ပုဒ်မ
original article here – လယ်ယာစနစ်စမ်းသပ်
ဒါကြောင့်နောက်တဖန်အ, က Frame ကသင့်ရဲ့ခေါင်းအုံးအောက်မှာကစောင့်ရှောက်, ရွှေစာလုံးထဲမှာ print ထုတ်ပါကအကြောင်းပြောဆို, Twitter အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်. ဤအစီရင်ခံစာကြောင့်ရွှေအလေးချိန်ရဲ့တန်ဖိုးရှိပါ!